Dominica waa, aragtidayada, jasiiradda ugu xiisaha badan ee Kariibiyaanka waxayna ku faantaa heer nololeed sare ee gobolka.
Astaamaha gaarka ah ee ka mid noqoshada barnaamijka:
shuruudaha degenaanshaha looma baahna;
suurtogalnimada in lagu daro carruurta ka yar 25 sano barnaamijka;
wax shuruud u ah waxbarashada;
looma baahna wareysi;
looma baahna fiiso lagu galo dhulka 120 dal, oo ay ku jiraan Great Britain, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Turkey, aagga Schengen;
Canshuur lagama qaado dadka aan wadan lahayn;
Baasaboorka Dominica 60 maalmood gudahood.
Sida loo helo dhalashada Dominica:
1. Maalgalinta sanduuqa barwaaqo sooranka:
$ 100 kun - codsadaha;
$ 175 kun - oo loogu talagalay codsadaha tooska ah oo lagu daro xaaska ama sayga ama hal qof oo daryeelaya;
$ 200 kun - oo loogu talagalay codsadaha tooska ah oo lagu daro xaaska / sayga ama sayga iyo laba qof oo daryeel ah;
2. Maalgalinta dhismaha:
Si loo helo dhalashada Dominica, waxaa lagama maarmaan ah in la iibsado hanti ma guurto oo wadar ahaan qiimaheedu yahay ugu yaraan $ 200 kun, hantida la sheegay waa inay lahaataa ugu yaraan 5 sano. Kharashaadka diiwaangelinta hantida, diiwaangelinta iyo canshuuraha waxaa lagu bixiyaa wax ka badan qiimaha hantida.
Dadka haysta dhalashada Afghanistan, Chechnya, Iraq, North Korea, Pakistan, Sao Tome Principe, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan iyo Yemen ma heli karaan dhalashada Dominica.
Marka laga reebo sharciga kor ku xusan waxaa loogu talagalay dadka sharci ahaan u haysta waddamada kale ugu yaraan muddo 10 sano ah, haddii maalgashigooda uusan ka imaan mid ka mid ah dalalka kor ku xusan.
7 kun 500 $ - codsadaha weyn, xaaska ama sayga;
$ 4 kun - oo loogu talagalay codsadaha ugu weyn da'da ugu yaraan 16 sano;
Cabirka waajibaadka gobolka ee ku saabsan helitaanka dhismaha
$ 25 kun - oo loogu talagalay codsadaha weyn, dadka daryeelka ku jira ugu yaraan 18 sano;
35 kun $ - loogu talagalay qoys ka kooban 4 qof, oo ay ku jiraan qofka codsanaya arjiga;
$ 50 kun - oo loogu talagalay qoys ka kooban 6 qof, oo ay ku jiraan qofka codsanaya arjiga.